Iiraan oo ka nixisay Maraykanka iyo Yuhuuda: gantaalo noo aasan ayaa jira xeebta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Sarkaal u hadlay ciidamka sida aadka u tababaran ee Jamhuuriga Iiraan ayaa ka nixiyay Maraykanka iyo Yuhuuda kadib marku shaaca ka qaaday in xeebta oo dhan ay gantaalo noocyo kala duwana ugu aasan yihiin dhulka hoostiisa.
”Koley waad maqasheen laakiin haddana aan idiin xaqiijiyo in xeebta Iiraan ilaa badda Cumaan aan dhulka hoostiisa ku keydino gantaalo noocyo badana oo xilli kasta u diyaara inay cadowga dhirbaaxo kulul ku dhiftaan ayuu yiri sarkaalku.
Dhawaan ayay ahayf markii markabka dagaalka ee Maraykanku leeyahay uu ku dhici waayay inuu soo galo badda Iiraan ee loo yaqaan gacanka Beershiya. Gacankaas ayaa aad isugu dhow waxana inta badan mari kara laba markab oo waaweyn.
”Waxaan joognaa goob kasta oo ka mida xeebtaas dheer iyo weliba meelo aanu cadowgu naga fileyn ayuu raaciyay. Iiraan ayaa dhawaan soo bandhigtey gujisyo nooca shanqadha yara oo hal mar dejin kara markabka weyn ee malaayiinta doolar ku baxdey ee qaada diyaaradaha.
”Waxa nalaamrey in aan saldhigyo ka samaysano badda Hindiya e baaxada leh si cadowga u baqno goyno inta aan ku soo dhawaan badayada ayuu yiri sarkaalku.